Kugadziriswa kweVulcanizing Press
Yekufambisa Belt Joint Vulcanizers
PVC PU Bhandi Yakabatana Vulcanizers
Belt Spot Kugadzirisa
Belt Edge Kugadzirisa
Yekuchengetedza Turu Kits
Seyeturu bhandi rekubatanidza chishandiso, iyo vulcanizer inofanira kuchengetedzwa nenzira imwecheteyo semamwe maturusi panguva uye mushure mekushandisa kuwedzera hupenyu hwayo hwebasa. Parizvino, muchina unoburitsa wakagadzirwa nekambani yedu une hupenyu hwehupenyu hwemakore anopfuura gumi sekureba sekushandiswa kwayo zvakanaka uye kuchichengetwa.
Idzi dzinotevera nyaya dzinofanirwa kutariswa kune kana uchichengetedza iyo vulcanizer:
1. Iyo yekuchengetera nharaunda yeiyo vulcanizer inofanirwa kuchengetwa yakaoma uye nemhepo inodzivirira kudzivirira nyoro magetsi emagetsi nekuda kwehunyoro;
2. Usashandise vulcanizer panze pamazuva anonaya kudzivirira mvura kupinda mubhokisi remagetsi rekudzivirira uye ndiro yekupisa;
3. Kana nzvimbo yekushanda yakanyorova uye iine mvura, kana uchikwatanura nekutakura muchina unobvongodza, shandisa zvinhu pasi kusimudza, uye usarega muchina unonyongana uchinangana nemvura;
4. Kana mvura ikapinda mundiro yekupisa nekuda kwekusashanda zvakanaka panguva yekushandisa, ndapota nyorera mugadziri wekutanga kugadzirisa. Kana kugadzirisa zvechimbichimbi kuchidikanwa, unogona kuvhura butiro replate yekudziya, udururire mvura pakutanga, wozoisa yemagetsi bhokisi rekushandisa kuti rishande nemaoko, ripisa kusvika 100 ℃, rirambe rakapisa tembiricha kwehafu yeawa, yakaoma iyo tambo, uye wozonama bhandi mune renyika mamiriro. Panguva imwecheteyo, mugadziri anofanirwa kufonerwa munguva yekutsiva kweseji kwese.
5.Kana iyo vulcanizer isingade kushandiswa kwenguva yakareba, iyo yekupisa ndiro inofanira kupisa chero hafu yemwedzi (iyo tembiricha yakaiswa pa100 ° C), uye tembiricha inofanirwa kuchengetwa kweinenge hafu yeawa.
For kubvunza pamusoro zvigadzirwa zvedu kana mutengo, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.